Deni oo Garoowe ku laabtay kana hadlay doorashadii Xasan iyo khilaafka Karaash - Caasimada Online
Home Warar Deni oo Garoowe ku laabtay kana hadlay doorashadii Xasan iyo khilaafka Karaash
Deni oo Garoowe ku laabtay kana hadlay doorashadii Xasan iyo khilaafka Karaash
Garoowe (Caasimada Online) – Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa barqanimadii maanta dib ugu laabtay magaalada Garoowe, oo mudo bil ka badan ka maqnaa, oo sidoo kale uu kusoo guuldareystay doorashadii xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Saciid Deni ayaa waxaa soo dhoweyntiisa ka qeybgalay ku-xigeenkiisa khilaafka kala dhaxeeya Axmed Karaash, guddoomiyaha baarlamaanka, xubno ka tirsan xukuumaddiisa, xildhibaano iyo shacab.
Saciid Deni oo ku guuldareystay doorashadii madaxtinimada Somalia ee 15-kii May uu kusoo baxay Xasan Sheekh ayaa waxaa khilaaf ka dhex qarxay isaga iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash oo sheegay in xilkii uu ka qaaday Deni maadaama uu jabiyay dastuurkii Puntland iskuna sharxay xilka madaxtinimada federaalka.
Madaxweyne oo soo dhoweynta kadib hadlay ayaa u mahad celiyay dhamaan mas’uuliyiintii ka qeyb gashay soo dhaweyntiisa. Sidoo kale waxa uu sheegay in Puntland ay ku faraxsan tahay Natiijada kasoo baxday doorashadii Madaxweynenimo ee ka dhacday Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo sidoo kale si dadban u soo hadal qaaday khilaafka kala dhaxeeya kuxigeenkiisa Axmed Karaash iyo sababta keentay.
“Markasta oo doorasho dhacdo dadku waa is qoonsadaan, marka sida dadka reer Puntland lagu yaqaaney waa in aynu horey uga socona, laysna cafiyaa dibna aan la eegin,” ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Madaxweyne Deni ayaa wararka la helay ay sheegayaan in uu qorsheeyay isbedelo uu ku sameeynayo qaar kamid ah Golihiisa Wasiirada iyo mas’uuliyiinta kale ee Maam
Saciid Deni ayaa todobaadkii u danbeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi oo arrimo qoys ah uu u tegay, halkaasoo ay ku xanuunsaneyso hooyadiis.
Dhinaca kale, waxaa aad loo hadal hayaa in Saciid Deni uu ka mid yahay xubnaha damaca kaga jiro in madaxweyne Xasan Sheekh uu u magacaabo xilka ra’iisul wasaare, hase ahaatee rajadaasi ayaa ah mid aad u yar.